ကျန်းမာရေးခရီးစဉ် - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီဆေးရုံတွေနဲ့ ဟိုတယ်တွေရှိလာတဲ့အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံဟာ အာရှမှာလာရောက်ဆေးကုသမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အောင်မြင်မှုတစ်ခုကို ရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝဝ၉ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ လူနာပေါင်း ၁.၄ သန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီး ၆၀%သော လူနာတွေဟာကုသမှုခံယူဖို့ သီးသန့်လာရောက်ခဲ့ကြခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သက်သာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ မြင့်မားတဲ့ နည်းပညာတွေအပြင် နိုင်ငံတကာအဆင့်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ ဆေးပညာ ကျွမ်းကျင်သူတွေရှိတဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာက ပြည်သူတွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကို သဘောကျတာကြောင့် ကိန်းဂဏန်းတွေ တိုးတက်လာတာပါ။ ထပ်ဆောင်းပြောရမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာရှိလာခဲ့တဲ့ ရိုးရာဖြစ်တဲ့ နွေးထွေးပျူငှာမှု၊ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အဆောက်အဦးတွေရှိမှု၊ လှပတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပြင် ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တွေကပါဆွဲဆောင်မှုအနေနဲ့ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ဒီလုပ်ငန်းဟာ ဆက်လက်ကြီးထွားလာတဲ့အလျောက် Samitivej ဟာလည်း ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အယုံကြည်ရဆုံး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးနိုင်သူအဖြစ် ဆက်လက်ဦးဆောင်နေဆဲပါပဲ။ ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့ လူနာတွေကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ စောင့်ရှောက်မှုတွေပေးတဲ့ သမိုင်းတွေရှိခဲ့တဲ့အပြင် သူတို့ရဲ့လိုအပ်မှုတွေနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ကိရိယာတွေကို အဆင့်မြှင့်တင်ထားပါတယ်။ လူနာတွေအားလုံးအနေနဲ့ ဆရာဝန်တွေနဲ့ သေချာစွာဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ ဘာသာစကားများစွာအတွက် ဘာသာပြန်များကိုလည်း အခမဲ့ ကူညီပေးလျက် ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆေးရုံတွေအနေနဲ့ လူနာတွေ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် သက်တောင့်သက်သာရှိစေတဲ့ ပရိဘောဂများနှင့် ကျယ်ဝန်းတဲ့ အပန်းဖြေစရာနေရာများလဲရှိပါတယ်။ လူနာတွေ အနေနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှ ဖျော်ဖြေမှုများအပြင် X-ray သို့မဟုတ် ultrasound ရလဒ်များကိုလည်း လူနာအခန်းထဲရှိ LCD မျက်နှာပြင်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဈေးဆိုင်များ၊ လူနာများအတွက် မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်အပြင် စားသောက်ဆိုင်များနှင့် ဘာသာရေးအဆောက်အဦများလဲရှိပါတယ်။
Samitivej မှာနောက်ဆုံးပေါ် ဆေးပညာနှင့်ပတ်သက်သောနည်းပညာများဖြင့် အဆင့်မြင့် စမ်းသပ်ခြင်း၊ ကုသခြင်းနဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေအများကြီးရှိတဲ့ ရောဂါများကိုလည်း ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့ ပစ္စည်းများကိုလည်း ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမှီအောင် အဆင့်မြှင့်တင်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်တဲ့ United Nations Children’s Fund (UNICEF)၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) နှင့် နိုင်ငံတကာချိတ်ဆက်မှု ကော်မရှင် (JCI) တို့အပါအဝင် အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှလည်းအသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြီးမားဆုံးအင်အားကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အလုပ်အပေါ်တာဝန်ယူတဲ့ ပါရမီရှင် သမားတော်ကြီးတွေနဲ့ သူနာပြုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာအလုပ်ကို ကြိုးစားလုပ်ဆောင်တတ်ကြပြီး အမြင့်ဆုံးလေ့ကျင့်ခဲ့ရုံသာမက ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာသာမက ပြည်ပမှာပါ ဆယ်စုနှစ်များစွာအထိ အတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့ကြသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Samitivej မှ ဝန်ထမ်းများသည် ကလေးအထူးကုများနှင့် မွေးကင်းစစောင့်ရှောက်မှု အထူးကျွမ်းကျင်သူများမှစပြီး နှလုံးအထူးကုများ၊ အရိုးခွဲစိတ်ပညာရှင်များ၊ အရိုးအကြောအထူးကုများအပြင် ဆေးဝါးအထူးကျွမ်းကျင်သူများအထိ အရည်အချင်းပြည့်ဝသူများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ သင်တို့ဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့အခါမှာ သင့်လျော်တဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရှိနေအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ရက်ချိန်းယူခြင်းများကိုလည်း မောက်စ်ကို ကလစ်လုပ်ရုံမျှဖြင့် အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ICU နှင့် CCU အရေးပေါ်ယာဉ်တွေ အချိန်ပြည့် အသင့်ရှိနေပြီးအရေးပေါ် လေကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးယာဉ်များမှလည်း ဒေသတွင်းမျာရှိတဲ့ လေယာဉ်ကွင်း ၃ဝ ကျော်အနီးအနားရှိ လူနာများအသုံးပြုရန် အသင့်ရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူနာတွေအနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ဂရုစိုက်မှုတွေကိုရရှိနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပြီးလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
Poonsak Waikwamdee, M.D.
Associate Professor Kittichai Luengtaviboon, M.D.
Surgery - Cardiac Surgery & Surgery - Thoracic Surgery
Somrak Mongkolchaisup, MD.